Nepalistudio » मोदी भ्रमणको विरोध किन नगर्ने ?
मोदी भ्रमणको विरोध किन नगर्ने ?
र, मोदीको आसन्न नेपाल भ्रमणबारे अधिकांशले विरोध गरेका छन् । अधिकांशले भनेका छन्– हिजो नाकाबन्दी गरेर हामीलाई दुःख दिएका मोदीलाई स्वागत गर्नु हुँदैन । केही बौद्धिक व्यक्तिहरुले पनि त्यति बेलाको आक्रोश र रिस अहिले पोखिरहनु भएको छ ।
यस्तै स्टाटस र कमेन्ट देखेपछि मेरो मनमा प्रश्न उठ्यो– के साँच्चिकै मोदी भ्रमणको विरोध गर्नु पर्छ ?
पछिल्ला दिन विश्व राजनीतिका केही घटनाक्रमलाई मैले सुक्ष्मरुपमा फलो गरिरहेकी छु । उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरियाबीच सन् १९५० को दशकपछि भएको सम्बन्धको यु टर्न, अमेरिका–उत्तर कोरियाबीच फेरिएको सम्बन्ध, उत्तर कोरियाली नेता किम जङ–उन र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङबीच दुई पटकसम्म भएका भेटघाट, फ्रेन्च राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले अमेरिकी संसद्मा गरेको सम्बोधन, जर्मन चान्सलर एन्जेला मर्केलले युरोपेली मुलुकहरुका राष्ट्रप्रमुखसँग गरेका कुराकानी, रुस र ईरान अनि सिरियाका सन्दर्भबारे अन्तर्राष्ट्रिय तथा नेपाली मिडियामा आएका समाचारहरु पढिरहेकी छु ।
हो, म राजनीतिशास्त्रको विद्यार्थी होइन । कतिपय यस्ता सन्दर्भहरुको विषयमा मलाई अन्य बुद्धिजिवी तथा राजनीतिक विश्लेषकहरुको जति ज्ञान नहुन सक्छ । तर, के बिर्सन हुँदैन भने नेपालमा पनि राजनीतिक तहलाई र अहिलेसम्मको राजनीतिक बुझाईलाई बदल्नुपर्छ भन्ने लागेर नै मैले लामो समय गरिरहेको पत्रकारितालाई विश्राम दिएर मैले राजनीतिक ‘एरिना’मा जम्प मारेकी हुँ ।
अब लागौँ, मोदीको भ्रमणको विषयमा ।
अहिले मोदीको भ्रमणलाई लिएर विभिन्न प्रतिक्रिया आइरहेका छन् । तर, के बिर्सनु हुँदैन भने उनी हाम्रा छिमेकी राष्ट्रका राष्ट्रप्रमुख हुन् । एउटा सच्चा नेपाली भएर सोच्नु पर्ने हुन्छ– हामीले चाहेर पनि छिमेकी बदल्न सक्दैनौँ । तर, रणनीतिक हिसाबमा कदम चाल्ने हो भने छिमेकीलाई आफू अनुकुल बनाउन चाहिँ सकिन्छ ।
हिजो भारतले लगाएको नाकाबन्दीको पीडा अहिले पनि हाम्रो मनमा त्यसरी नै रहेको छ । त्यति बेला नेपाली दाजुभाइ, दिदीबहिनीले दिनहुँ जीवनमा पनि निकै ठूला समस्याको साक्षात्कार गर्नु पर्यो । तर, त्यो पीडा सम्झिएर अहिले मोदीको विरोध गर्नुमा कुनै अर्थ छैन । किनकि अहिलेको विरोधले त्यतिबेलाको घाउमा कुनै अर्थ राख्दैन । त्यसले हामीलाई न पीडा भुल्न सहयोग गर्छ, न गहिरो गरि बसेको त्यो घाउलाई सन्चो पार्छ ।
हामीले त अहिले मोदीसँग हिजोका सम्झौताहरुबारे कुरा गर्न सक्नुपर्छ । त्यसमा चाहिने रिभिजनहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्ने हो भने हाम्रो जीत निश्चित छ । खासमा म चाहन्छु, हामीले प्रत्येक अवसरलाई आफ्नो जीतमा बदल्न सक्नु पर्छ । हिजो एकअर्काका ठूला दुश्मन भनेर चिनिएका उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरियाले पनि अहिले बुझिसकेका छन्, शत्रुताले विकास गर्न सक्दैन । विकासका लागि एकआपसी सहयोग चाहिन्छ, एकअर्कालाई सहयोग गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैले, उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरिया अब एकअर्काको भूमीमा पाइला राख्दै छन्, नयाँ परिवेशमा आफूहरुलाई अगाडि बदल्दै छन् । तर, हामी के फेरि पछाडि फर्किन खोज्दै छौँ ?
अहिले जसरी देशभक्तको कुरा डिफाइन गरिएको छ, त्यो गलत छ । देशभक्ती भनेको वा राष्ट्रवाद भनेको अरुको विरोध होइन । विरोध गर्दैमा हामीले आफूलाई राष्ट्रवादी प्रमाणित गर्न पनि सक्दैनौँ । राष्ट्रवाद वा देशभक्तको वकालत गर्नका लागि हामीले देशमा भएका उद्योग, कलकारखाना तथा हाम्रा उत्पादनको सहयोग गर्नु पर्ने हुन्छ । हाम्रो उत्पादन के हुन्छ, के हामीले उत्पादन गरिरहेका छौँ, हाम्रोमा कति कलकारखाना छन्, हामी औद्योगिक मोडल कस्तो छ, वैदेशिक सहयोगलाई हामीले कस्ता उत्पादनशील कुरामा लगानी गरिरहेका छौँ ? यस्ता प्रश्नमा हामीले जहिलेदेखि सोच्न थाल्छौँ, तबमात्र हामीले राष्ट्रवाद वा देशभक्तको विषयमा चर्चा गर्न सक्छौँ । आफ्नो सामान केही नहुने तर भारत वा अर्को छिमेकीलाई गाली गर्नु भनेको राष्ट्रवाद होइन ।
कोमल वलीका यसअघिका ब्लगः
तीन वर्षअघिको वैशाख १२ सम्झिएर…
खुमबहादुर खड्कालाई सम्झिएर
फेसबुके र ट्विटेहरुको नाममा
अर्कोतिर अहिलेको मोदी भ्रमणलाई हामीले हाम्रो फाइदामा परिणत गर्न सक्नुपर्छ । यसमा कसैको द्विविधा छैन, भारत विश्वको उदाउँदो अर्थतन्त्र हो । हाम्रो नजिकैको छिमेकी त्यसरी फड्को मार्दै छ भने हामीले त्यसलाई किन क्यास नगर्ने, त्यसलाई हाम्रो फाइदाका लागि किन प्रयोग नगर्ने ?
हाम्रो फाइदामा प्रयोग गर्न सक्यौँ भने मात्र मोदीको यो भ्रमण अर्थपूर्ण हुनेछ । अन्यथा विरोधका स्वर चर्को बनाएर कुनै फाइदा हुँदैन, कुनै सफलता प्राप्त हुँदैन, कुनै अर्थ हुँदैन । हो, तत्कालका लागि हामीले ‘पपुल्यारिटी’ गेन गरौँला, स्टाटसमा धेरै लाइक आउला र ट्विटहरु धेरै रिट्विट होला । तर, त्यो कुनै समाधान होइन, एउटा देशको विकास लागि ।
त्यसैले अहिले मोदी भ्रमणको विरोध गर्नुको अर्थ छैन । हो, हाम्रा योजना के छन्, मोदी भ्रमणलाई कसरी हामी अनुकुल प्रयोग गर्ने भन्नेमा चाहिँ हामीले सरकारलाई सचेत चाहिँ गराउन सक्छौँ, त्यसका लागि हामीले आवाज चर्काउन सक्छौँ ।
तर, मोदी भ्रमणकै विरोध गर्नुमा कुनै अर्थ छैन ।
फेरि पनि हामीले वर्षौदेखि भन्दै आएकै छौँ– बैगुनीलाई गुनले जवाफ दिने हो ।
प्रकाशित मिति :- २६ बैशाख २०७५, बुधबार २१:३५